Tsamba Yechipiri kuvaKorinde 11:1-33
Pauro uye vaapostora vaya vaizviona sevakanakisisa (1-15)
Matambudziko akasangana naPauro semuapostora (16-33)
11 Ndinoti dai maindiitirawo mwoyo murefu pakuva kwangu nekaupenzi. Asi ndingatoti muri kutondiitira mwoyo murefu! 2 Nekuti ndine godo pamusoro penyu, godo rakafanana neraMwari, nekuti ini ndakakuvimbisai kuti muroorwe nemurume mumwe chete kuti ndikuunzei kuna Kristu semhandara yakachena.+ 3 Asi ndinotya kuti sekunyengedzwa kwakaitwa Evha nenyoka nemanomano ayo,+ pfungwa dzenyu dzingangoshatiswa dzikabva pakutevera Kristu nemwoyo wese uye makachena.+ 4 Nekuti iye zvino kana mumwe munhu akauya, okuparidzirai nezvemumwe Jesu asiri uya watakaparidza, kana kuti mukagamuchira mumwe mweya usiri uya wamakagamuchira, kana mamwe mashoko akanaka asiri aya amakabvuma,+ munongobvumirana naye. 5 Nekuti ndinofunga kuti hapana pandakaderera kupfuura vaapostora venyu vakanakisisa.+ 6 Asi kunyange ndingasava nyanzvi pakutaura,+ handizvo zvandiri paruzivo; takaratidza kuti ndizvo zvatiri nenzira dzakawanda uye muzvinhu zvakasiyana-siyana. 7 Kana kuti ndakatadza here nekuzvininipisa kuti imi mukwidziridzwe, ndichikuzivisai nemufaro mashoko akanaka aMwari pasina mutengo?+ 8 Ndakabira dzimwe ungano pandaigamuchira zvavaindipa kuti ndikushumirei.+ 9 Pandakanga ndiinemi, ndikashayiwa, hapana kana wandakaremedza, nekuti hama dzakabva kuMakedhoniya ndidzo dzakandipa zvese zvandaida.+ Ndaiedza kusambokuremedzai uye ndicharamba ndichidaro.+ 10 Chero bedzi chokwadi chaKristu chiri mandiri, handizomboregi kuzvirumbidza+ nezvenyaya iyi muAkaya yese. 11 Ndinozviitirei? Zvinoreva here kuti handikudii? Mwari anoziva kuti ndinokudai. 12 Asi ndicharamba ndichiita zvandiri kuita,+ kuti ndishayise zvekutaura vaya vari kutsvaga chingaita kuti vanzi vakaenzana nesu panyaya dzavanozvirumbidza nadzo. 13 Nekuti varume vakadaro vaapostora venhema, vashandi vanonyengera, vanonyepedzera kuva vaapostora vaKristu.+ 14 Izvozvo hazvishamisi, nekuti Satani pachake anoramba achinyepedzera kuva ngirozi yechiedza.+ 15 Saka hazvishamisiwo kana vashumiri vake vachiramba vachinyepedzera kuva vashumiri vekururama. Asi kuguma kwavo kuchaenderana nemabasa avo.+ 16 Ndinoti zvakare: Ngaparege kuva nemunhu anofunga kuti ndiri munhu asingafungi. Asi kunyange mukafunga kudaro, chindigamuchirai henyu semunhu asingafungi, kuti iniwo ndimbozvirumbidzawo. 17 Zvandiri kutaura iye zvino hazviratidzi kutevera muenzaniso waKristu asi ndezvemunhu asingafungi, ari kuzvirumbidza nekunyanya kuva nechivimbo. 18 Sezvo vakawanda vari kuzvirumbidza panyama, iniwo ndichazvirumbidza. 19 Sezvo muchizviti munonzwisisa kwazvo, munongosiya vanhu vanoita zveupenzi vakadaro. 20 Ndingatoti, munongosiya chero munhu anokuitai varanda, chero anoparadza zvinhu zvenyu, chero anokubvutirai zvamuinazvo, chero anozvikwidziridza pamusoro penyu, uye chero anokurovai kumeso. 21 Zvandiri kutaura zviri kutinyadzisa, nekuti zvingatoita sekunge takaita zveumbwende. Asi kana vamwe vakaita zveushingi, ndava kutaura semunhu asingafungi, neniwo ndinoita zveushingi. 22 Ivo vaHebheru here? Kana neniwo.+ Ivo vaIsraeri here? Kana neniwo. Ivo vana vaAbrahamu here? Kana neniwo.+ 23 Ivo vashumiri vaKristu here? Ndava kupindura semunhu anopenga, ini ndinotovapfuura: Ndakaita basa rakawanda kuvapfuura,+ ndakaiswa mujeri kakawanda,+ ndakarohwa kasingaverengeki, uye ndakapotswa nerufu kakawanda.+ 24 Kashanu ndakarohwa shamhu 39 nevaJudha,+ 25 ndakarohwa neshamhu katatu,+ ndakatemwa nematombo kamwe chete,+ ndakapinda mutsaona yengarava katatu,+ ndakaita usiku hwese nezuva rimwe ndiri pamusoro pemvura mugungwa; 26 panzendo kakawanda, panjodzi dzemunzizi, panjodzi dzemakororo, panjodzi dzinobva kuvanhu vekwangu,+ panjodzi dzinobva kune vemamwe marudzi,+ panjodzi muguta,+ panjodzi musango, panjodzi mugungwa, panjodzi pakati pehama dzenhema, 27 pabasa nepakushanda zvakaoma, pakurara ndakasvinura kakawanda,+ pakuva nenzara nenyota,+ pakushaya zvekudya kakawanda,+ pachando nepakushaya zvekupfeka. 28 Kuwedzera pazvinhu izvozvo zvekunze, pane chimwe chinhu chinogara chichinditambudza zuva nezuva: kuzvidya mwoyo pamusoro peungano dzese.+ 29 Ndiani anoshaya simba, ini ndikasashayawo simba? Ndiani anogumburwa, ini ndikasashatirwa? 30 Kana ndichifanira kuzvirumbidza, ndichazvirumbidza nezvezvinhu zvinoratidza kusava nesimba kwangu. 31 Mwari uye Baba vaShe Jesu, uyo anofanira kurumbidzwa nekusingaperi, anoziva kuti handisi kureva nhema. 32 KuDhamasiko gavhuna aiva pasi pamambo Aretasi akanga akachengetedza guta revaDhamasiko achida kuti andibate, 33 asi ndakadzikiswa ndiri mudengu nepahwindo raiva parusvingo,+ ndikabva ndapukunyuka.